Ungalubuyisela njani uqhagamshelo lwenethiwekhi kwi-Mac, -Emulator.online ▷ 🥇
I-Apple Macs kunye neeMacBooks ziikhompyuter ezintle kakhulu ukujonga nokubeka eofisini okanye kwidesika yethu, kodwa, kubuhle babo kunye nokugqibelela, baseseekhompyuter, ke banokuyeka ukusebenza kwaye banokuba neengxaki zonxibelelwano. ngaphezulu okanye ngaphantsi kulula ukusombulula.
Ukuba siphawula kwi-Mac yethu ukuba uqhagamshelo lwe-Intanethi luza kwaye luhambe, amaphepha ewebhu awavuleki ngokuchanekileyo okanye usetyenziso olusebenzisa iinkonzo ze-Intanethi (ezinje ngeVoIP okanye usetyenziso lwenkomfa yevidiyo) azisebenzi njengoko kufanelekile, sele ufikelele kwisikhokelo esifanelekileyo: Apha enyanisweni siya kufumana zonke iindlela, zilula kwaye zikhawuleze ukufaka isicelo nakumsebenzisi we-novice, to Buyisela uqhagamshelo lwenethiwekhi kwi-Macukuze ubuyele kukhuphelo kwaye ulayishe isantya osibonileyo ngaphambi kokuba ingxaki ivele kwaye ubuyele emsebenzini okanye ufunde kwi-Mac yakho kungakhange kwenzeke nto.
FUNDA OKANYE: Isisombululo se-router kunye neengxaki zokudibanisa i-wifi
Ulubuyisela njani uqhagamshelo lweMac
Ukubuyisela uqhagamshelo kwi-Mac siza kukubonisa zombini izixhobo zokuchonga ezikhoyo kwinkqubo yokusebenza ye-macOS ngokukhawuleza ukuba zikulungele ukusetyenziswa kunye namaqhinga athile obuchwephesha ukuze uqhagamshelo lwe-Intanethi lusebenze kwakhona ngokungathi siqale iMac okokuqala.
Sebenzisa ukuxilonga ngaphandle kwamacingo
Ukuba ingxaki yoqhakamshelwano iyenzeka xa sixhunyiwe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi, sinokuvavanya ngesixhobo Ukuchongwa okungenazingcingo inikezwe yiApple uqobo. Ukuyisebenzisa, qiniseka ukuba uqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi, cinezela kwaye ubambe Ukhetho (Alt), masiye kwimenyu yeWi-Fi ephezulu kwaye ucinezele Vula uxilongo olungenazingcingo.
Sifaka iziqinisekiso zeakhawunti yomlawuli, emva koko silinde isixhobo sokwenza uhlolo lwaso. Kuxhomekeka kwisiphumo, iwindow inokuvula kunye neengcebiso ekufuneka zilandelwe, kodwa isishwankathelo sefayile yokusebenza eyenziwe yiMac ukubuyisela unxibelelwano sinokuvela. Ukuba ingxaki iphakathi (umgca uza kwaye uya), iwindow efana nale ilandelayo inokuvela.
Kule meko kuyacetyiswa ukuba kusebenze ilizwi Lawula uqhagamshelo lwakho lweWi-Fi, ukushiya umsebenzi wokujonga uqhagamshelo kwi-Mac, ukuze ikwazi ukungenelela xa kunokubakho iingxaki. Ukuvula inqaku Yiya kwisishwankathelo Endaweni yoko, siya kufumana isishwankathelo solwazi malunga nenethiwekhi yethu kunye neengcebiso eziluncedo zokufaka isicelo.
I-DNS yinkonzo ebalulekileyo yoqhagamshelo lwe-Intanethi kwaye, nokuba umgca usebenza ngokugqibeleleyo kwaye imodem ixhunyiwe, kwanele ukuba le nkonzo ibonise ukungasebenzi kakuhle (umzekelo, ngenxa yokumnyama kwe-DNS yomqhubi) ukunqanda unxibelelwano ngawo onke amaxesha. iwebhusayithi.
Ukujonga ukuba ingxaki ihambelana ne-DNS, vula imenyu IWifi O ethernet phezulu ekunene, cofa into Vula ukhetho lwenethiwekhi, masiye kunxibelelwano olusebenzayo ngoku, cofa ku-Advanced kwaye ekugqibeleni uye kwiscreen DNS.
Siza kubona idilesi ye-IP yemodem okanye i-router yethu, kodwa sinokongeza iserver entsha ye-DNS ngokucinezela i-icon ezantsi kunye nokuchwetheza 8.8.8.8 (Google DNS, ehlala isebenza kwaye). Emva koko siyasusa iserver endala ye-DNS kwaye ucinezele emazantsi Kulungile, ukusebenzisa kuphela iseva ekhethwe sithi. Ukuze wazi okungakumbi sinokufunda isikhokelo sethu Ungayitshintsha njani i-DNS.
Cima useto lwenethiwekhi kunye neefayile ezikhethiweyo
Ukuba i-Wireless Diagnosis kunye notshintsho lwe-DNS alusombululanga ingxaki yoqhagamshelo, sinokuzama ukucima ubumbeko lwenethiwekhi olukhoyo kwinkqubo, ukuze siphinde ukufikelela kwinethiwekhi ye-Wi-Fi esetyenzisiweyo kude kube ngoku. Ukuqhubeka, cima uqhagamshelo lwangoku lwe-Wi-Fi (ukusuka kwimenyu ephezulu ye-Wi-Fi), vula i-Finder kwi-Dock bar ezantsi, yiya kwimenyu O, Siza kuvula Yiya kwifolda kwaye sibhala lendlela ilandelayo.
/ Ithala leencwadi / Ukukhetha / Useto lweNkqubo
Nje ukuba le folda ivule, cima okanye uhambise ezi fayile zilandelayo kwi-Mac yokuphinda usebenzise i-bin:
Sizicima zonke iifayile, emva koko siqale kabusha iMac ukuze utshintsho luqale ukusebenza. Emva kokuqalisa kwakhona, sizama ukunxibelelana nenethiwekhi ye-Wi-Fi kwakhona, ukujonga ukuba unxibelelwano lusebenza kakuhle.
Ukuba asiyisombululi le nto, kufuneka siphande ngakumbi, kuba kunokuba kukho umba ongachaphazeli ngqo iMac kodwa kubandakanya imodem / i-router okanye uhlobo lonxibelelwano esilusebenzisa ukunxibelelana nalo. Ukuzama ukuyilungisa, sikwazama neengcebiso ezinikezwe kolu luhlu lulandelayo:
Masiqale kwakhona imodem-Le yenye yeengcebiso ezilula, kodwa inokusombulula ingxaki, ngakumbi ukuba ezinye izixhobo ezixhumeke kwinethiwekhi efanayo nazo zibe neengxaki ezifanayo neMac.Ukuqala kwakhona kuya kukuvumela ukuba ubuyisele unxibelelwano ngokukhawuleza ngaphandle kokwenza enye into.
Sisebenzisa uqhagamshelo lwe-5 GHz ye-Wi-Fi-Zonke iiMac zala maxesha zinonxibelelwano lwebhendi-mbini kwaye kukhethwa ukuba uhlale usebenzisa ibhendi ye-5 GHz, engaphantsi kokuphazamiseka kuthungelwano olusondeleyo kwaye ngokukhawuleza okukhulu kuyo nayiphi na imeko. Ukuze ufunde okungakumbi sinokufunda isikhokelo sethu Umahluko phakathi kweinethiwekhi ze-Wi-Fi ze-2,4 GHz kunye ne-5 GHz; yeyiphi engcono?
Sisebenzisa uqhagamshelo lwe-Ethernet: enye indlela ekhawulezayo yokuqonda ukuba ingxaki kukuba uqhagamshelo lweWi-Fi lubandakanya ukusetyenziswa kwentambo ye-Ethernet ende kakhulu, ukuze ukwazi ukuqhagamshela iMac kwimodem nokuba ivela kumagumbi ahlukeneyo. Ukuba unxibelelwano luyasebenza, ingxaki ikwiModyuli yeWi-Fi yeMac okanye imodyuli yeWi-Fi yemodem, njengoko kubonisiwe kwisikhokelo. Isisombululo se-router kunye neengxaki zokudibanisa i-wifi.
Siphelisa iRange Extender okanye iPowerline: Ukuba sidibanisa iMac ngeWi-Fi eyandisiweyo okanye iPowerline, sizama ukuyisusa kwaye siqhagamshele ngqo kwinethiwekhi yemodem okanye sisebenzise intambo ye-Ethernet. Ezi zixhobo ziluncedo kakhulu, kodwa zinokufudumeza ngokuhamba kwexesha kwaye zivimbe uqhagamshelo lwakho lweintanethi de zisuswe kwaye ziphinde zidityaniswe emva kwemizuzu embalwa.
Ukufaka onke amacebo aboniswe kwesi sikhokelo sinokuzisombulula ngokwethu iingxaki ezininzi zoqhakamshelwano lweMac, ngaphandle kokubiza ingcali yecompyuter okanye uvule ezinye izixhobo kwaye uphambene phakathi kwewaka elinzima kwaye kunzima ukulandela izikhokelo Iwebhu.
Ukuba, ngaphandle kwengcebiso kwisikhokelo, unxibelelwano lwenethiwekhi alusebenzi kwi-Mac, akukho nto iseleyo ukuyenza kodwa qala inkqubo yokubuyisela emva kokugcina iifayile zakho kwi I-drive yangaphandle ye-USB; ukuqhubeka nokubuyiselwa kwakhona funda nje izikhokelo zethu Uyilungisa njani iMac, ukulungisa iiMicimbi zeMacOS kunye neempazamo mi Iindlela ezili-9 zokuqalisa kwakhona iMac yakho kunye nokubuyisela ukuqala okufanelekileyo.
Ndidibene neWi-Fi kodwa andikhangeli: ndenze ntoni?
Uyiqinisekisa njani i-5G
Isisombululo ukuba i-Wi-Fi ye-Android ayiyi kuqhagamshela kwinethiwekhi okanye kwi-Intanethi
Ungayitshintsha njani i-DNS kwiFire TV Stick
Usijongisisa njani isitishi seVodafone
Uyizisa njani i-Intanethi kuwo wonke umgangatho kunye nekona yendlu
Yabelana ngoxhumano lwentambo ngaphandle kokusebenzisa i-router
Yenza i-network ye-VPN yokudlala kwi-intanethi ukwenza i-LAN
Igama lokugqitha kunye negama lokungena kuzo zonke iirouters
Qwalasela ukuhanjiswa kwezibuko kwi-router ngokulula ukuvula amazibuko onxibelelwano
Unxibelelwano olukude kunye ne-desktop ukusuka kwi-iPhone / kwi-IP kwikhompyuter yakho
Yabelana ngeefayile kunye neqela lokuqala kwiWindows okanye ukhubaze